Metaly ao amin'ny vatana, tadiavo hoe iza no lehibe indrindra | Nutri Diet
Ny singa simika sasany fantatra amin'ny anarana hoe metaly dia manan-danja tokoa amin'ny zavamananaina: ny zava-maniry, ny biby, ny holatra ary ny bakteria. Na dia toa tsy vita aza ny fiainana sy ny vy, metaly maro no ilaina amin'ny fiainana.
Mitranga izany fa ny metaly dia tsy hita toy izany rehefa mandrafitra ny metabolisma amin'ny zava-manan'aina izy ireo, izy ireo dia amin'ny endrika cations voarindra ao anaty tsiranoka na mifatotra amin'ny plasma na proteinina struktural. ¿Inona ny metaly ary nahoana izy ireo no manan-danja amin'ny vatantsika?
1 Ny maha-zava-dehibe ny metaly ho an'ny vatantsika
2 Inona avy ireo singa simika manan-danja indrindra amin'ny fiasan'ny vatantsika?
2.7 Sodium sy potasioma
3 Metaly mavesatra
4 Olana mety hiteraka antsika
5 Toy izao no hidiran'izy ireo amin'ny vatantsika
6 Sakafo ka manjavona ao anaty vatana ny metaly
Ny maha-zava-dehibe ny metaly ho an'ny vatantsika
Metaly na mineraly tsy hita eo amin'ny latabatra maharitra ihany izy ireo mianatra isika any am-pianarana, dia hita ao anatintsika ihany koa ary manana fiasa tena ilaina mba hiasa tsara ny vatantsika.
Eo amin'ny rafi-taolana izy ireo, amin'ny famoronana rà, ao anatin'ny sela, mifehy ny fitempon'ny fony izy ireo, afaka mifehy ny glucose sy miady amin'ny radika afaka, ireo izay tompon'andraikitra amin'ny fahanterana sy aretina lehibe hafa.
Inona avy ireo singa etogidro mmanan-danja indrindra amin'ny fiasan'ny vatantsika ve izy ireo?
Mba hiasa tsara ny vatantsika dia mila akora marobe izay tsy maintsy misy ao isika. Mizara roa ireo zavatra ilaina macronutrients, toa azy ireo tavy, proteinina ary gliosida, ary ny micronutrients, toy ny vitamina sy mineraly.
Fantatsika ny angon-drakitra fototra momba ny sakafo, fantatsika fa raha mihinana dibera isika dia mampiditra tavy ao amin'ny vatantsika, raha mihinana steak hena isika, dia manome proteinina, na izany aza, matetika, tsy fantatsika izay metaly na vitamina ananantsika dia mihinana ary izay tena ilaina amin'ny fahasalamantsika.
Misy singa simika 30 izay heverina ho ilaina amin'ny fiainana. Amin'ireo singa 30 ireo, 17 ny metaly, 4 dia semi-metaly ary ny sisa tsy metaly.
Ireo metaly 17 no nodinihina tena ilaina amin'ny fiainana ireto manaraka ireto.
Tsy ny rehetra ihany no zava-dehibeAvy eo lazainay aminao izay tena ilaina mba hanana vatana salama.
Izy io dia mineraly iray izay 99% amin'ny maha-posozy izay hita ao amin'ny sela taolana. Izy io koa dia hita ao amin'ny tsiranoka ivelan'ny sela sy ao amin'ny sela. Mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy mihinana vokatra toy ny ronono sy vokatra vita amin'ny ronono rehetra.
Ohatrinona ny kalsioma tokony ho rainao isan'andro?
Nozaraina 75% amin'ny hemoglobin, 5% myoglobin ary 25% no ao amin'ny atiny. Ny ambiny dia ampahany amin'ny anzima. Ny 10% -n'ny vy laninay amin'ny alàlan'ny sakafo ihany no metabolisma sy voadoka. Raha manana tsy fahampiana vy isika dia mijaly amin'ny tsy fahampian-dra, mba hisorohana izany dia tsy maintsy mihinana isika hena mena, legioma, legioma ary voankazo sasany.
Io no mineraly faharoa ananantsika indrindra amin'ny vatana. Izy io dia tafiditra ao amin'ny metabolisma ny calcium. Hitanay izany amin'ny trondro, aty na oats.
Sakafo manankarena fôforôra
Hitantsika amin'ny taolana sy ny tsiranoka intracellular izany. Mba hampitomboana ny haavon'izy ireo dia handray bebe kokoa isika trondro, voankazo, voamaina feno, legioma maintso, Etc.
Zava-dehibe ny fiasan'ny fihary tiroida. Trondro na ahidrano no ahitantsika azy.
Antioxidant super, tonga lafatra amin'ny fisorohana ny fahanteran'ny sela aloha loatra. Hitantsika izany ao amin'ny legioma, voankazo, hena mena na trondro.
Sodium sy potasioma
Mifampitohy ireo roa ireo, ny potasioma dia ao anatin'ny sela ary ny sodium kosa mijanona any ivelany ka misy ny fifanakalozana tena ilaina eo amin'izy ireo mba hiasa tsara.
Antioxidant voajanahary izay miasa miaraka amin'ny vitamina E.
Ilaina amin'ny famoronana tsara ny hemôglôbinina sy ny sela mena.
Noho ireo singa rehetra ireo dia mijanona ho mahay mandanjalanja ny vatantsika sy ny vatantsika na dia tsy tsapantsika akory aza. Ireto ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra.
Raha milaza isika fa manana metaly ao amin'ny vatantsika dia mieritreritra isika fa voaloto izy io ary mety tandindomin-doza izany. Na izany aza, araka ny hitantsika ny sasany amin'izy ireo dia mahasoa ho antsika fa ny hafa kosa tsy mba toy izany.
Manana fisalasalana maromaro momba ny fampidirana ireo metaly ireo ao amin'ny vatana isika, ny fomba hanesorana azy ireo, raha manimba izy ireo, sns. Avy eo dia hamaha ny fisalasalana isika ka rehefa ela ny ela dia tsy misy mijaly amin'ny olana ara-pahasalamana noho ny metaly mavesatra.
Metaly mavesatra Izy ireo dia singa simika izay amin'ny lafiny lehibe kokoa na kely kokoa dia ampahany amin'ny rafitry ny zavatra rehetra manodidina antsika. Manomboka amin'ny vovoky ny tany ka hatramin'ny vatantsika. Hitanay ny varahina, vy, kobalta, zinc, aliminioma, manganese, firaka, arsenika, sns.
Mipoitra ny olana rehefa arotsaka ao amin'ny vatantsika ny habetsahan'ireny metaly ireny ka manjary voapoizina isika.
Olana mety hiteraka antsika
Sarotra ny manaisotra metaly mavesatra, noho izany antony izany dia tsara ny mitandrina tsara amin'izy ireo satria ny fanararaotana azy ireo dia mety hiteraka ny manaraka aretina:
Fanemorana ny fampandrosoana
Ny tsy fanao mandritra ny fitondrana vohoka
Toy izao no hidiran'izy ireo amin'ny vatantsika
Ireo metaly ireo dia hita manodidina antsika sy matetika midira ao amin'ny vatantsika raha tsy hitantsika izy ireo. Ny fomba mahazatra indrindra dia ireto manaraka ireto:
Vokatra ara-pahasalamana sy hatsaran-tarehy
Trondro manga lehibe, toy ny trondro, salmon, na tuna
Sakafo ka manjavona ao anaty vatana ny metaly
Misy fepetra samihafa tsy hanjavona voajanahary amin'ny metaly, sakafo maro no ilaina amin'ny fitarihana ireo metaly ireo ary fandroahana voajanahary amin'ny vatantsika izy ireo. Ny sasany ny sakafo tsara indrindra mba handray an-tsaina dia:
Cilantro: Ity ahitra ity dia ampiasaina amin'ny fomba nentim-paharazana ho famonoana sakafo amin'ny ankamaroan'ny nahandro Amerika Latina. Ny iray amin'ireo fananana dia ny chelator, misy vitamina A sy K be dia be izay manampy amin'ny fidirana an-tsehatra sy hiadiana amin'ny metaly.
Tongolo gasy: tongolo gasy dia iray amin'ireo antibiotika voajanahary Soso-kevitra ny hitsaboana aretina maro, koa fanatanjahan-tena izany ary mitarika ny karazana poizina isan-karazany hiala ny vatantsika.
Ahidrano Chlorella: manana detoxifier mahery izay manala ny poizina rehetra hitany amin'ny lalany. Io no sakafo tena ilaina hitsaboana raha be dia be ny metaly mavesatra hita ao anaty fitsapana.
Raha voamarina fa manana metaly bebe kokoa izahay, dia hanampy fanampin-tsakafo ireto sakafo ireto izay hohanina isan'andro mandritra ny telo volana farafaharatsiny.
Mandritra ny debugging, azo atao fa ny voka-dratsy toy ny fanaintainana, mony na fivalanana. Ilaina ny mandray azy io satria na eo aza ny mahazo aina dia tsy tokony hotapahina ny fitsaboana.
Ampirisihina ny dokotera iray fianakaviana hanara-maso ny fitsaboana ary ny fepetra rehetra noraisina mba hamongorana ireo metaly be loatra ao amin'ny vatana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Metaly ao amin'ny vatana
Fernando Membreno dia hoy izy:
Inona no vokatry ny metaly be loatra amin'ny vatana?
Valiny tamin'i Fernando Membreño
Yvette dia hoy izy:
Nanampy ahy be dia be io fampahalalana tsara io. Misaotra anao
Mamaly an'i Yvette
fampitahana dia hoy izy:
Valiny amin'ny collation
fitondran-tena joc dia hoy izy:
Mamaly ny fitsipi-pitondrantena joc
Ny metaly be loatra dia miteraka homamiadana, fahatarana eo amin'ny fivelarana, fahasimban'ny voa, ary hatramin'ny fahafatesana aza
Salama dia hoy izy:
pejy tsara ... nanampy betsaka ahy izany, misaotra
Jak dia hoy izy:
Izy ireo koa no mahatonga ny schizophrenia, mahatonga ny pituitary hanafina ny zavatra iray izay mahatonga ny olona handre sy hahita zavatra izay tsy azontsika, ny antom-piarahamonina iraisana, velona hoy izy ireo, mitondra homamiadana amin'ny karazan-karazany rehetra, metaly mihozongozona ny metaly amin'ny hatetika iraisan'ny rehetra. na cosmic raha afaka miteny izany aho. fitahiana
Mamaly an'i jas